Artist Abbey - yabucala Studio Apartment - I-Airbnb
Artist Abbey - yabucala Studio Apartment
Sibekwe embindini wedolophu kwisitrato esikhulu kumgama wokuhamba wedolophu kunye nesithili saseHot Springs. Kodwa iApartment ivalelwe ngasemva kwaye yindawo ezolileyo efana neyokubuyela eneendawo zokuhlala ezilula, kwindawo yokupaka ezitalatweni kunye neveranda entle yegadi kunye nendawo engaphandle.
Ukutya okuphekwe ekhaya kunye neepakethe ezikhethekileyo zokwamkela, zingafumaneka, cela ukuba unomdla.
Isakhiwo sethu esikhulu sineenxalenye ezintathu, nganye ineendawo zayo zokungena. Okokuqala, ngokungena kwayo kwi-Date Street, yi-2000 sq. ft. Igalari kunye nestudiyo esisebenzayo, esibizwa ngokuba yi "Artist Abbey". Okwesibini likhaya losapho lwethu, elinomnyango walo ku-1st Ave. Okwesithathu, i-Artist Abbey Guest Space, efikelelwa ngendlela yegadi esuka ku-1st Ave, ukusuka kwindawo yokupaka yabucala kwaye inomnyango wayo wabucala.
IGcisa iGalari yeAbbey iya kuba nemisitho yobugcisa kunye nomculo kwi-T okanye C, "Art Hop" ebusuku unyaka wonke, ngoMgqibelo wesibini wenyanga nganye ukusuka ngo-6:00pm-9:00pm. Igalari iya kubamba imisitho yobugcisa ekhethekileyo yoluntu, kwaye iya kuvulwa ngeeyure ezithile zoshishino. Siyathemba ukuba uya kudlula!
-Artist Abbey Studio Apartment isasazwe ngaphandle 24 hrs phakathi undwendwe ngalunye.
-Ukucoca kunye nokucoca
-Nceda ushiye iifestile kunye nocango luvuliwe xa uphuma
-Uqhagamshelwano lwangaphandle kunye nemikhosi, i-6 'umgama kunye nemaski
4.98 · Izimvo eziyi-228
Sikwindawo esembindini, kodwa sisenegadi enoxolo. Wamkelekile ukuba uphumle egadini apha okanye uhambe-hamba edolophini. Jonga icandelo elithi "Ukujikeleza" kuzo zonke izinto ekufuneka zenziwe kwindawo!
Sihlala kwipropati kwaye sinokufumaneka ngefowuni.
Zive ukhululekile ukusindwendwela kwiGalari ye-Abbey yamagcisa, okanye ungandibona ndiphuma ndinkcenkceshela igadi!